‘वाइडबडी’ घोटाला प्रकरणः छलफल नगरी उप–समितिले भनेकै आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने ! « News24 : Premium News Channel
‘वाइडबडी’ घोटाला प्रकरणः छलफल नगरी उप–समितिले भनेकै आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने !
काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिदबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उप–समितिले निकालेको निष्कर्षका आधारमा मात्रै कसैलाई कारवाही नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल नगरी, थप निश्कर्ष नदिई उप–समितिले भनेकै आधारमा कसैलाई पनि कारवाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
लेखा समितिको थप निश्कर्षपछि आवश्यक ठानिए छानविन समिति गठन गर्न सकिने भन्दै उहाँले संबैधानिक निकायले पनि अनियमितता देखाए जो सुकैलाई पनि कारबाही गरिने तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउन नहुने बताउनु भयो ।
यस्तै, प्रवक्ता बाँस्कोटाले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ५ सय ३६ दशमलव ५६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको जानकारी पनि दिनुभयो । चिनी मिलले अव किसानलाई प्रति क्वीन्टलको ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा नघटाई दिनुपर्ने छ । ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भने सरकारले अनुदान वापत दिने छ । यस्तै, सरकारले विभिन्न पर्वका लागि १३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले हरेक नागरिकले पारिश्रमिकको निश्चित रकम आमा–बुबाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका, निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिने, स्वरोजगार, ब्यापार–व्यवसाय गर्ने र निवृत्तिभरण पाइरहेकाले आमा–बाबुको बैंक खतामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।